-AYER - Iimpawu zeStamp-Changing Verbs
-AYER - ii-verbs zitshintshi ze-Stem
Izenzi zintshintsho ezitshintshisayo zesiFrentshi zidibaniswa kunye neziphelo ezifanayo njengamaxesha onke -Izenzi zangaphandle kodwa zinamaqela ahlukeneyo ahlukeneyo okanye iimpawu ezimbini. Izenzi zitshintsho ngamanye amaxesha zibizwa ngokuba ngama-boot verbs okanye izenzi zesihlangu ngoba ukuba ujikeleze iifom ezitshintshileyo kwitafile yokuxubusha ngezansi, isimo esifanayo sibonakala njengebhokisi okanye isihlangu.
Zonke izenzi ezigqityiweyo-izithintelo zitshintsho zokutshintsha, kodwa kukho iintlobo ezimbini ezahlukeneyo:
Iilwimi eziphelisa kwi- payer (jonga ngezantsi) zineenguqulelo zokukhetha
Iilwimi eziphelela kwi-- oyer kunye nomgca zinokuguqulwa kwesigqibo esifanelekileyo
Kwixesha langoku , izenzi-zenzi zineempembelelo zokuzikhethela: zitshintsha kuzo zonke iifom kodwa thina kunye nawe.
I- i-i i- pay
u-ke u-u u payez
I- i- i i-i i-I i- int
Okanye zinokuthi zidibaniswe njengexesha eliqhelekileyo -Izenzi:
I paye sisi hlawule
il paye bahlawula
Ezi zihlomelo ezimbini zezivumelwano-zenziwayo zenziwayo ziyamkeleka ngokufanayo.
Igalelo leqela lokudibanisa
balayer - ukutshabalalisa
yecrafta - ukuthusa
isilingo - ukuzama
ukuhlawula - ukuhlawula
Ezi zitshintsho zitshintshi azikhawuli kwixesha langoku; ubone umhlawuli kuwo onke amaxesha okanye isifundo kwizenzi zenzi-mali kwezinye ixesha.
Qaphela: Iilwimi eziphelile-- oyer kunye nomgca zinokutshintsha okufanayo, kodwa kuyadingeka: i-verb-ander-verbs.
Izenzi zintshintsho ezitshintshisayo zesiFrentshi zidibaniswa kunye neziphelo ezifanayo njengamaxesha onke -Izenzi zangaphandle kodwa zinamaqela ahlukeneyo ahlukeneyo okanye iimpawu ezimbini.
Izenzi zitshintsho ngamanye amaxesha zibizwa ngokuba ngama-boot verbs okanye izenzi zesihlangu ngoba ukuba ujikeleze iifom ezitshintshileyo kwitafile yokuxubusha ngezansi, isimo esifanayo sibonakala njengebhokisi okanye isihlangu.
Iilwimi eziphelisa kwi- doer zinokutshintshwa kwe-stem change
Iilwimi eziphelela kwi-- oyer kunye nomgca- jonga (jonga ngezantsi) unokuguqulwa kwesigqibo esifanelekileyo
Ngexesha langoku , izenzi zesiFrentshi ezigqityiweyo- kunye-kunye nomgca kufuneka zitshintshe y kwiindidi zonke kodwa thina kunye nawe.
Ndiyifake i- nettoyons
usebenzise i- intanethi
I- intanethi i- intanethi
Ezi zitshintsho zitshintshi azikhawuli kwixesha langoku; jonga umnxeba kuwo onke amaxesha okanye isifundo malunga nezenzi-zenzi ngamanye amaxesha.
umthengisi - ukugaya
umqashi - ukuba aqeshe
thumela - ukuthumela
Uhlamba - ukuhlambulula
ukubuyisela - umlilo
i-tutoyer - ukusebenzisa kuphela
i-vourier - ukuyisebenzisa ( funda nge-vs vs u )
u- ennu i es vous ennuyez
il ennu i i ennu i ent
umxhasi - ukuxhomeka, cinezela
ukunyusa - ukuzala
i-essuyer - ukususa
Ezi zitshintsho zitshintshi azikhawuli kwixesha langoku; ubona ukukhuphaza ngexesha lonke okanye isifundo malunga nezenzi-zenzi ngamanye amaxesha.
Qaphela: Iilwimi ezigqityiweyo-zineenkqubela ezifanayo zitshintsho, kodwa zikhethwa ngokuzenzekelayo: izenzi zentetho.
Izenzi zintshintsho ezitshintshisayo zesiFrentshi zidibaniswa kunye neziphelo ezifanayo njengamaxesha onke -Izenzi zangaphandle kodwa zinamaqela ahlukeneyo ahlukeneyo okanye iimpawu ezimbini. Olu tshintsho luya kwenzeka kumaxesha amaninzi eFrentshi kunye nemizwelo kunye nemizwelo, njengoko kuboniswe kwitafile elandelayo.
Khumbula ukuba utshintsho lwezinto ezikhethiweyo zenzelwe izenzi zentetho kwaye zifuneka ukuba zenzelwe izenzi kunye neyunithi.
Ngexesha langoku , ukuzithoba , kunye nokunyanzeliswa , ukuguquka kwesigxina kwenzeka kuzo zonke izibambiso ngaphandle kwethu kunye nawe:
je paie nettoie ennuie
kuphela iipaki iifayile ennuies
il paie nettoie ennuie
nathi hlawula iifutha bantwini
nawe philisa nettoyez ennuyez
ba ihlawulwe mhlophe ukuxhamla
nathi iigayi iifutha ennuyions
nawe payiez nettoyiez ennuyiez
(u) paie nettoie ennuie
(us) hlawula iifutha bantwini
(wena) philisa nettoyez ennuyez
Kwixesha elizayo kunye nemimiselo , utshintsho lwe-stem luya kwenzeka kuwo onke amacebo.
Akukho sitshintsho kwisigqitho esingafezekanga , sithatha inxaxheba , sithatha inxaxheba , sidlula ngokulula , okanye singaphelelanga .
Jonga izenzi zengqungquthela ezixubileyo kuwo onke amaxesha:
hlawula ukucoca ukunyusa
Qaphela: Iingcamango ezichaphazelekayo zezi patheni zentshintsho zentshukumo ziyafana ngazo zonke iintlobo ezahlukeneyo zezenzi zokutshintsha.
Esidlulileyo IsiFrentshi: I-Grammar yesiFrentshi kunye neNkcazelo yegama lesiGama
Indlela yokudibanisa "Ukuphelisa" (ukubeka / ukuthumela ukulala) ngesiFrentshi
Ixesha elidlulileyo kwisiFrentshi (i-Passé Simple)
Konke malunga 'Dormir,' isiNgesi esingaqhelekanga sesiFrentshi efana 'Ukuhamba,' 'Sortir'
Indlela yokudibanisa "Qinisekisa" (kwi-Confide) ngesiFrentshi
Imizekelo yeZinguqulelo zenyama kunye neenguqu zeMichiza
Gqoka ukunyuka kwee Shorts ehlobo
Indlela yokufunda iMifanekiso yeBass Fretboard
I-Paraprosdokian (i-Rhetoric): Inkcazo kunye nemizekelo
Iindawo ezimbi kakhulu zokubeka iPiano yakho
I-Santiago Calatrava, iNjineli kunye noMcwangcisi waseSpain
IiCD zoLuntu oluSasazo omele uluthenge - Ubusika 2015
Iincwadi zeKhisimusi ezilungileyo kakhulu zezingane malunga nokuzalwa kukaYesu
Iindlela zePiano yeMinwe